အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ပေါက်ဖေါ်ေ၇.၊ မင်း...အားကီးကံကောင်းလယ်ကွာ.
ဆေးဖိုးအပြင် ၀ါးခ ပါ ပေးနေရသည်..၊
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:19 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook